ခါးနဲ့ တင်ပါးတဝိုက်နာကျင်ခြင်းတွေအတွက် kinesiology တိပ် - Hello Sayarwon
ခါးနဲ့ တင်ပါးတဝိုက်နာကျင်ခြင်းတွေအတွက် kinesiology တိပ်
ခါးနဲ့ တင်ပါးတဝိုက်နာကျင်ခြင်းတွေဟာ အဖြစ်များပြီး သင့်အနေနဲ့ ဒီဝေဒနာတွေကို အောက်ထစ်တခါတော့ ခံစားဖူးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊အပ်စိုက်ခြင်း အစရှိတဲ့ ကုသမှုနည်းလမ်းဟောင်းတွေကို သင့်အနေနဲ့ သိရှိပြီးသား ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဝေဒနာတွေကို kinesiology တိပ်တွေက ကုသပေးနိုင်မယ်လို့ သင်ထင်ပါသလား။ အဖြေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ရှာကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီနာကျင်မှုတွေဟာ sciatic အာရုံကြောကြောင့် ဖြစ်လာရပါတယ်။sciatic အာရုံကြောဟာ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓါကိုယ်မှာ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အရှည်လျားဆုံး အာရုံကြောတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအာရုံကြောဟာ ခါးရိုးခွေအတွင်းမှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီး ခြေထောက်တလျှောက် အောက်ကိုဆင်းသွားကာ ခြေဖဝါးမှာ အဆုံးသတ်ပါတယ်။sciatic အာရုံကြောကြောင့် ခါး၊တင်ပါးနဲ့ ခြေထောက်တို့ နာကျင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ထုံကျဉ်တဲ့ဝေဒနာကို ခံစားရမှာဖြစ်သလို ခြေထောက်များ လေးလံအားနည်းခြင်း၊လှုပ်ရှားရခက်ခဲခြင်း စတာတွေကိုပါ ခံစားရမှာပါ။
ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ နာကျင်မှုက ပိုဆိုးလာမှာ ဖြစ်သလို မတ်တပ်ရပ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ လက္ခဏာတွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်တဖက်တည်းမှာပဲ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။ အာရုံကြောရဲ့ ဘယ်နေရာကို ထိခိုက်သလဲဆိုတာကို မူတည်ပြီး နာကျင်မှုဟာ ခြေချောင်းလေးတွေအထိ ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်နာကျင်မှုကနေ ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုအထိ ဒီဂရီအမျိုးမျိုး ခံစားရမှာပါ။
သင့် တင်ပါး၊ပေါင်နဲ့ ခြေထောက်တို့မှာ အားနည်းမှု၊ထုံကျဉ်မှုတို့ကို တောက်လျှောက်ခံစားနေရတယ်၊အခြေအနေပိုဆိုးလာတယ် ဒါမှမဟုတ် ဆီး၊ဝမ်းမထိန်းနိုင်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတိုင်ပင်သင့်ပါပြီ။
Kinesiology တိပ်က ဘာတွေကူညီပေးနိုင်သလဲ။
Kinesiology တိပ်ဟာ အာရုံကြောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုတွေ၊ကြွက်သားတောင့်တင်းမှုတွေကို သက်သာလျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ်ဒါဏ်တွေ ဖြစ်မလာအောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
Kinesiology တိပ်တွေဟာ သင့်နာကျင်မှုကို သက်သာစေတဲ့အပြင် ကြွက်သားတွေကိုလည်း ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသေးတယ်။ ခါးနဲ့ တင်ပါးတဝိုက်နာကျင်ခြင်းတွေအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Kinesiology တိပ်တွေကို အခွေလိုက်ဖြစ်စေ၊ဖြတ်ထားပြီးသား တိပ်အနေနဲ့ ဖြစ်စေ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တိပ်တွေကို သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှာ ကပ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူရဲ့ အကူအညီကို လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Kinesiology တိပ်တွေဟာ လူအများစုနဲ့ သင့်တော်ပြီး ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိဖူးဆိုပေမယ့် အသုံးမပြုခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က ဒီကုသမှု(Kinesiology တိပ်)ကို အသုံးပြုဖို့ လမ်းညွှန်အကြံပေးတယ်ဆိုရင် ဒီတိပ်ကို အသုံးပြုတဲ့ အခြားလူနာတွေမှာရော ထိရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် ရှင်းလင်းစွာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Kinesiology တိပ်တွေဟာ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် ဒါဟာ ဘာများကွာလို့ပါလိမ့်လို့ သင့်အနေနဲ့ တွေးကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းက ဘာမှမကွာပါဘူး။ ပိုလှပြီး ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိအောင် ရောင်စုံလုပ်ထားတဲ့ သဘောလောက်ပါပဲ။ ဆိုတော့ကား သင့်အနေနဲ့ ဆေးကုသရာမှာ သုံးတဲ့တိပ်တွေကိုတောင် ဖက်ရှင်ကျကျ သုံးနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ စိတ်ကြိုက်အရောင်ကို စိတ်ချမ်းသာသလို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အများဆုံး ရွေးချယ်လေ့ရှိတဲ့ အရောင်ကတော့ အပြာရောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရုံကြောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နာကျင်မှုကြောင့် ခါးနဲ့တင်ပါးတဝိုက်၊ခြေထောက်တို့မှာ ထုံကျဉ်ကိုက်ခဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုခံစားရတဲ့အခါ ပုံမှန်အသုံးပြုနေကျ ကုသမှုတွေအပြင် kinesiology တိပ်တွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
kinesiology တိပ်တွေဟာ ဘာဆေးဝါးမှပါဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် စိတ်ချရပြီး အသုံးပြုရလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုတာတွေ ရှိမယ်ဆိုရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ မေးမြန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
Pain Management and Sciatica. http://www.webmd.com/baby/guide/back-pain- in-pregnancy#1. Accessed January 17, 2017.
Sciatica. http://www.nhs.uk/conditions/sciatica/Pages/Introduction.aspx. Accessed January 17,2017.
What You Need to Know About Sciatica. http://www.spine-health.com/conditions/sciatica/what-you- need-know- about-sciatica. Accessed January 17,2017.
Kinesio Taping Technique and Trigger Point (KT).
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01752179. Accessed January 17, 2017.
Gak Hwang-Bo, Jung-Hoon Lee. Effects of kinesio taping inaphysical therapist with acute low
back pain due to patient handling: A case report. International Journal of Occupational Medicine
and Environmental Health. (2011) 24: 320. doi:10.2478/s13382-011-